Wararka - kobcinta suuqa barafka ee Shiinaha
barafka barafka ee Shiinaha
Ciyaaraha Olombikada Jiilaalka ee 2022 waxay dhiirrigelisay horumarka isboortiga jiilaalka ee Shiinaha, oo leh meelo lagu nasto oo ku dhow gobol kasta oo Shiinaha ah. Sannadka 2018 oo keliya, waxaa jiray 39 goobo dalxiis oo dhowaan la furay, oo wadartoodu tahay 742. Inta badan goobaha lagu caweeyo ee barafka ayaa wali si liidata ugu qalabaysan kaliya hal ama dhawr roog oo sixir ah, badankooduna waa waddooyinka aasaasiga ah. Kaliya 25 meelaha dalxiis ee barafka ayaa u dhow heerarka reer galbeedka, badiyaa ma lahan xaalado hoy, kaliyana xaddidan ayaa loogu yeeri karaa dalxiis baraf oo dhab ah. Si kastaba ha noqotee, sanadihii la soo dhaafay, waxaa jiray isbedello cusub sannad kasta, oo ay ku jiraan Beidahu, cuiyunshan, Fulong, yundingmiyuan, Wanke Songhua Lake, Taiwu, Wanda Changbai Mountain, Wanlong iyo Yabuli. Mustaqbalka, meelaha fasaxyada qaarkood laga howlgalo afar xilli ayaa sidoo kale si wada jir ah looga shaqeyn doonaa. Dalka Shiinaha waxaa ku yaal 26 goobo dalxiis oo barafka lagu ciyaaro (badankood waxay ku hareeraysan yihiin Beijing iyo Shanghai, waxaana jiri doona afar cusub oo cusub laga bilaabo 2017 ilaa 2019) iyo 24 100% jardiinooyin baraf macmal ah oo ku xeeran Beijing, oo leh hoos u dhaca ugu sarreeya ee dhawr boqol oo mitir ah.
Tirada fardooleyda ayaa si aad ah u kordhay tan iyo sanadkii 2000. Sannadkii 2015, Shiinaha waxaa la siiyay waddanka martigelinaya ciyaaraha Olimbikada Jiilaalka ee 2022, taasoo sii dhiirrigelisay xamaasadda dadweynaha ee barafka. Xilliyadii baraf ee la soo dhaafay, waxaa jiray koror la taaban karo. Xilliga barafka ee 2018/19, wadarta tirada barafka ayaa ku dhowaad 20 milyan, tirada dalxiisayaasha barafka ayaa sii kordheysa sanadba sanadka ka dambeeya. Shiinuhu wuxuu goor dhow noqon doonaa laacib weyn oo ka tirsan warshadaha barafka.
Caqabada suuqa barafka ee Shiinaha waa habka barashada barafka. Kuwa bilowga ah, haddii khibrada ugu horreysa ee barafka ay liitaan, heerka celinta ayaa aad u hooseysa. Si kastaba ha noqotee, meelaha loo dalxiis tago ee Shiinaha badanaa waa dad aad u camiran, waxaa jira tiro badan oo ka mid ah kuwa bilowga ah ee kantaroolka ah, xaaladaha ugu horreeya ee barafka ma fiicna. Iyada oo taa laga duulayo, habka waxbarista barafka barafka alpine-ka ee caadiga ah waxaa loogu talagalay barafleyda deganaashaha wiigga, taas oo aan daruuri ahayn in ay ku habboon tahay qaabka isticmaalka Shiinaha ee hadda. Sidaa darteed, mudnaanta koowaad ee Shiinaha waa in la horumariyo nidaam baris oo ku habboon xaaladaha qaran ee Shiinaha, qabashada suuqa weyn ee barafka lagu ciyaaro ee Shiinaha, halkii si fudud loogu oggolaan lahaa inay la kulmaan barafka hal-mar.
Warqad cad oo ku saabsan warshadaha barafka (warbixinta sanadlaha ah ee 2019)
Cutubka koowaad goobaha barafka iyo safarada barafka
Goobaha barafka lagu ciyaaro iyo barafleydu waa labada cirif ee warshadaha barafka oo dhan, iyo dhammaan meheradaha iyo waxqabadyada warshadaha barafka ayaa ku wareegsan
Hareeraha ulaha. Sidaa darteed, tirada goobaha barafka lagu ciyaaro iyo tirada barafka ayaa aasaaska u ah warshadaha barafka
Tilmaamayaasha. Marka loo eego xaaladda dhabta ah ee Shiinaha, waxaan u kala qeybineynaa goobaha barafka lagu ciyaaro goobo loo maro barafka (oo ay ku jiraan meelaha loo dalxiis tago ee banaanka iyo meelaha lagu caweeyo)
Dalxiis barafka gudaha, qalcad qallalan iyo jimicsi barafka lagu ciyaaro.
1, Tirada goobaha dalxiis ee barafka lagu ciyaaro, kuwa barafka lagu ciyaaro iyo kuwa barafka lagu ciyaaro
Sanadka 2019, waxaa Shiinaha ka jiri doona 28 goobo dalxiis oo cusub, oo ay ku jiraan 5 goobo dalxiis oo gudaha ah, oo wadar ahaan ah 770
Heerka kobaca wuxuu ahaa 3.77%. 28 ka mid ah meelaha lagu caweeyo ee barafka lagu daro, 5 waxay dhisteen marinno fiilooyin ah, mid kalena wuu furmay
Waddo cusub oo hawada sare mara. Dhamaadka 2019, oo ka mid ah 770 beeraha barafka ee Shiinaha, tirada dalxiisyada barafka leh marinnada cirku waxay gaareen 100%
155, koror ah 4.03% marka la barbardhigo 149 ee 2018. Tirada skiers-ka ee goobaha dalxiis ee barafka gudaha ayaa ka kordhay 2018
Laga soo bilaabo 19.7 milyan sanadkii 2013 illaa 20.9 milyan sanadka 2019, koror sanadle ah oo gaaraya 6.09%.
Isbeddelka tirada goobaha dalxiis ee barafka lagu ciyaaro iyo tirada barafka ayaa lagu muujiyay Jaantuska 1-1.
Jaantus 1-1: Tirakoobka goobaha dalxiis ee barafka lagu ciyaaro ee lagu ciyaaro Shiinaha
Marka la gaaro waqtiga Beijing ee Ciyaaraha Olombikada Jiilaalka, dhammaan noocyada waxqabadka dallacsiinta barafka waxay ku kobcayaan jihada qoto dheer qotodheer
Heerka beddelashada ayaa si weyn loo hagaajiyay. Marka la eego xisaabinta warbixintan, waxaa jiri doona qiyaastii 13.05 milyan oo kuwa gudaha ku ciyaaraya sannadka 2019,
Marka la barbardhigo 13.2 milyan sanadka 2018, waxyar ayuu ka hooseeyaa. Kuwaas waxaa ka mid ah, saamiga loo yaqaan 'skiers' oo leh khibrad hal mar ah oo ka kordhay 30% sanadka 2018
38% ilaa 72. 04%, oo saamiga skiers-ka ayaa kordhay. Baaskiillada Shiinaha ee 2019
Tirada barafka ee qofkiiba wuxuu ka kordhay 1.49 ee 2018 ilaa 1.60.
Jaantus 1-2: safarada barafka & kuwa lagu ciyaaro